सिसामाथि हिँड्ने ‘स्काइवाक टावर’ बन्ने भयो ३ वर्षमै !
कस्तो हुनेछ दक्षिण एशियाकै पहिलो ‘स्काइवाक टावर’ ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | निजी क्षेत्रका युवा उद्यमीको पहलमा काठमाडौँको कमलादीमा ‘स्काइवाक टावर’ निर्माण हुने भएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा दक्षिण एशियाकै पहिलो ‘स्काइवाक टावर’ निर्माण हुने भएको हो ।
वण्डर्स नेपालले निर्माण गर्ने सो टावर कमलादीस्थित शान्तिकुञ्जमा रहेको १३ रोपनी जग्गामा बन्ने भएको छ । टावर निर्माणका लागि २ अर्ब रुपियाँ लगात अनुमान गरिएको छ ।
तीन वर्षमै निर्माण सम्पन्न
यो परियोजनाको निर्माण आगामी तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने योजना लिइएको छ ।
सो परियोजनाको शब्यदृश्य परिकल्पना सार्वजनिक गर्दै वर्ल्ड नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर आकर्षण पोखरेलले तोकिएको समयभित्रै उक्त टावरको निर्माण सक्ने बताए ।
वल्र्ड नेपालले टावर बनेसँगै सगरमाथा र बुद्धको देश भनेजस्तै दक्षिण एशियाकै पहिलो स्काई टावरको परिचय नेपालले पाउने वल्ड दाबी गर्यो ।
नेपालका विभिन्न १० स्थानमा स्काईवाकको निर्माण र सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर सो कम्पनीले काठमाडौँको कमलादीलाई छानेको हो ।
यो टावर १०० मिटरको हुने परियोजनाका इन्जिनियर सन्जिव रोकाहाले जानकारी दिए ।
भिडियो स्केच सार्वजनिक कार्यक्रममा वन्डर्स नेपालका सदस्य समेत रहेका रोकाहाले त्यहाँ सुविधासम्पन्न पार्किङसहितका व्यावसायिक कम्प्लेक्स समेत बनाइने बताए । उक्त टावरभित्र अत्याधुनिक सबै सुबिधाहरु उपलब्ध हुनेछन् ।
साथै टावरबाट काठमाडौं उपत्यकाको दृष्यावलोकन गर्न सकिनेछ उनको भनाई छ । इन्जिनियर रोकाहाले ‘स्काईवाक टावर’लाई समृद्धिको स्तम्भको पहिचानको रुपमा काठमाडौंको मुटुमा ठड्याउने बताएका हुन् ।
‘स्काईवाक टावर’ निर्माणपछि काठमाडौंमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पर्यटक बढ्ने उनको दाबी छ । ३ वर्षभित्र स्काइवाक टावर निर्माण भएर हरेक नेपालीले एकपटक टावर चढ्ने इन्जिनियर रोकाहाको भनाई छ ।
उनले यो परियोजना सम्पन्न भएपछि तत्कालै यो भन्दा ठूलो र राष्ट्रिय गौरवको अर्को परियोजना आफूहरुले ल्याउने दाबी गरे ।
कस्तो बन्नेछ टावर ?
टावरको ७५ मिटरको अग्लाईमा सिसामाथि हिँड्न सकिने सुविधा दिइने अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
उनले भने ‘साहासिक व्यक्तिका लागि सिसामाथि हिँड्ने अनुभव नेपालमै दिने यो टावर पहिलो हुनेछ ।’
अध्यक्ष पोखरेलले उक्त टावार माथिबाट सीधै तल भुईमा हेर्न सकिने भएकाले अवलोककर्तालाई आकाशका हिँडेको जस्तै अनुभूति हुने बताए ।
उक्त टावरको माथिल्लो भागमा ओपन रेस्टुरेन्टसहित नाइट क्लव हुनेछ भने भुई तल्लाका भागमा कफी तथा सोभिनियर सपहरु राखिनेछन् । अध्यक्ष पोखरेलले टावरमा इभेन्टहरु पनि गर्न सकिन जिकिर गरे ।
टावरमा प्रवेश गर्दा निश्चित शुल्क लिइनका साथै टावर भित्र जानेहरुको सुरक्षा जाँच समेत हुनेछ ।
यसैगरी, उक्त टावरमा अण्डरग्राण्डसहित १५० भन्दा बढी कार र ५ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल पार्क गर्न सकिने सुविधा दिइने अधयक्ष पोखरेलको दाबी छ ।
कम्पनीले टावरलाई सुरक्षित पर्यटकीय र मानेरन्जनको गन्तब्य बनाउने योजना लिएको छ ।
टावर निर्माणका लागि सरोकारवालाको शुभकामना
उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाले परियोजना सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।
नेकपाका नेता राजन भट्टराई, कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ, भीमसेनदास प्रधान, प्रदेश ३ का भौतिक योजना मन्त्री केशव स्थापित, पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालसो परियोजनाले देशको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा टेवा पुग्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले परदेशमा सीप सिकेर देश विकास र समृद्धिका लागि भिजन लिएर आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे।
‘यो परियोजना देशकै नमुना हो’ उनले भने ‘दुई वर्षमै सम्पन्न गरेर ३ वर्षमा अपरेशनमा ल्याउने भनिएको छ । समयमै सक्यो भने अर्काे नमुना हुन्छ । किनकी हाम्रो देशमा समयमै कुनै काम हुँदनन् ।’
यता प्रदेश ३ का भौतिक पुर्वाधार मन्त्री स्थापितले भने स्काइवाक टावर निर्माणमा आफूले सबै सहयोग उपलव्ध गराउने बताए ।
उनले यस्तै परियोजनाका लागि बनेपामा ३२ सय रोपनी जग्गा दिन समेत आफू तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे ।